Author: Bakinos Brarisar
Waxaa qorey mayraxdiir Mudane ra’iisulwasaare dadka reer Muqdisho uma baahna cid booqata iyo cid la oyda maalinta eheladooda iyo qoysaskooda la laayo waayo ilmada iyo booqashadu dadkii la xasuuqay soo noolayn maayaan.
Reer Muqdisho waxa ay u baahanyihiin cid amnigooda sugta sida aad adiguba amnigaaga u sugtay.
Waxa cusug ay u baahanyihiin cid u dammaanad qaadda xasillooni iyo deggenaan ay ku noolaadaan. Waxa ay u baahanyihiin cid la xisaabtanta dadka u qaabbilsan arrimaha amniga.
Waxa ay u baahanyihiin cid ka hortagta falalka waxashnimada ah ee maalin walba haldoorka Soomaaliyeed lagu gummaadayo. Reer Muqdisho uma baahna duco afka ah oo aan petnland la socon ee waxa ay u baahanyihiin ficil dhab ah oo dadka inta hadhay lagu badbaadiyo. Fadlan aan caawino Wiil yar Isha Buro ka soo baxday Hooyadiisa ku dhiban tahay aan caawino waxaa awoodo Sahal.
Said Dani waa shaqsi danayste ah, aan xeerin waxba, kaliya u nool maxaan cunaa iyo dantiisa shaqsiyadeed xataa haddii ay dhaawacayso dadkiisa iyo deegaankiisa. Musharax said dani oo hadda ah Musharax u taagan xilka madaxweynaha Puntland wuxuu shaaciyey oo buugiisa tirakoobka ku sheegay inay Puntland yihiin gobolada Bari iyo Nugaal oo kaliya.
Said Dani gobolka Mudug uma ahayn Puntland shalay, ha ogaadaan marka Xildhibaanada sharaxta leh ee gobolkaas in uusan istaahilin inay codkooda siiyaan. Ugu dambayn Ha ogaadaan Xildhibaanada sharaxta leh ee gobolada Bari iyo Nugaal in uusan Said Dani u ahayn Puntland iyo shacabkeeda tixgelintii ay ka mudnaayeen, maantana uusana istaahilin inay codkooda siiyaan.
Xildhibaanada Puntland na waxay matalayaan shacab ilbax ah oo ilaashanaya danahooda yaqaanana yoolkooda ay hiigsanayaan Kooxda Aaran Jaan na kama gadi karto Danayste Said Dani.
Rer mudug cayar loodaa wale Maxey baasuke rideeen dad Waxbartey igadheh uwac qof Rer mufuga oo saan camal Ucayara baasukayashan urida.
Kani dastkurka Gabay la magacbaxay Ninka dooran duubka u xiroo asad inoo doorra Waxaan kula hadlayaa Baarlamaanka Cusub ee Puntland. Dulaal iyo malaal baa ku badan dagalladeeniiye Codkoo loo dareerriyo haddaan qofiba dookhiisa Dadku ruux kusoo xulan arinni waa dan iyo jeebbe Haddii daacadnimo ay jirtoon horumar doonayno Xubnayohow dastuurkeena iyo diinta lagu dhaarshay Danjir loo igmaday baad tihiin doorashada guudde Idinkaan dariiqaad martaan wada dayeeynaaye Doog iyo abaar lama simee dheega dulucdayda.
Nin dalkiisa jeceloon katagin dibadna aan aadin Nin dadkiisa taageera oo daacad ugu hiisha Nimaan doorin dhaqankiisa oo diinta u adeega Nin difaaca shacabkoo ka jira daalinkiyo tuugga Nin midnimada doonnoon sinaan sina u diidaynin Dastuurkq lawada aaminoo dux iyo iimaanle Duqowdiyo waxgaradkuba nimeey aad u darajayso Diiwaanka ceebbeed nimaan dacal ka suuraynin.
Nin damqada dharaartii bulshadu garab ka doonayso Nin u daran cadaawaha is bida daanana u gaysta Nin daleesha aan naalo iyo doorin kara dasfuurka Nin puntland ku daabacan tahoon duugin sharafteena Soomaalina dushow wada ritoo hadimadow diida Ninka dooran duubkow xiroo asad inoo doora. Asagaan duntiisiyo naqaan deeqsigii dhalaye Xusub na daadihin karoo noo dulqaad badane Asagaan diyaasbaro ahayn soo dulaaltagaye Asagaa danteeniyo pentand damaca keenaaye Ninka dooran duubka u xirroo asad inoo doorra.
Ninka dalagga peentland dhirtaa duhurki loo aayo Dableydiyo ninkaa ciidamada aan dayicin jeerna Oo ay dadweynuhu rabaan duhur inoo dhaarsha. Dabeecada khalqigu kama sinmaan kalana door roone Daganaanta iyo fiiradiyo dabacsanaantiisa Qaarbaa darooriya warkoon dulucda beegayne Hadal aan dhaguhu diidinnoo beena laga dayray Aflagaado diidkiisa iyo sharaf u duubnaanta Doorkiyo abwaannada siduu diiradda u saaray Dumarkiyo caruurraha siduu ugu dadaalaayo Duqowdiyo siduu uga warqabo duubabkii dhaqanka Ilaaheey ha daayee walee waan ku diirsadaye Ninka doorran duubka u xidhoo Asad inoo doorra.
Waa taswiir dhabta ka hadlaya Walahii innaan nabad laheli doonin intii saqiraadu hu’ iyo hoos la’aan yihiin.
Xasillooni lama helayo intaan xaalkaan ku wada jirno. Majeerteen iyo inta madaxa madow Majeerteen baabadan hhh shiina yabey Chiniisku 40 bey ukala baxan mj 60 hhh Ar wuxu badana lol hhhhhhhhhh. War deg deg ah madaxdooyadi somalia Oo ey caawa xabadi kabilaamatey iyo madax Tooyadii oo lasoowerarey sacaduna waa 2: Shacabka Puntland weey hadleen Dahal madhinan umaleyn asad for Puntlander. Garoowe ciida dhaqaqdey maanta Loma kala harin sodhaweyntii madax Weynaha dhaartu udhimantahey mudane Asad osman dadbadan dhikar baa kudhici Doona wale kanoxow nafta waa ader Madax weyne asad shacabkiisa waka Shaqeystey oo amniga ey gur yahooda Kuhurtam ninka usameyey weyan Shacabka puntland balanteenu wa asad.
Diinta iyo dhaqanka kudoorta deeq iyo Hoodalana kudoorta dulqaad iyo samir Kudoorta codkiinana deeq usoiya esh cala Hees madax weynaha dhaartu udhiman tahey Share and difaac iyo dowlad nimo guuul.
Dangoroyo iyo maanta iyo soodhaweynta Madaxweyne asad osman loma kala harin Difaac iyo dowlad nimo shara and like. Namadoonadan waxay ka hadlayaan xubin ay ku lahaayeen aqalka hoose e Odayaashu waxay cadaynayaan in kursigan weerarka loogu soo qaaday, lana rabo in Pentland lagu soo weeraro.
Markaas maxaan u sheegaynaa Pentland in ay kursigan dufaacdo si aan Pentland dhibaato loogu gaysan. Fadlan aan caawino Wiil yar Isha Buro ka soo baxday Hooyadiisa ku dhiban tahay aan caawino waxaa awoodo Sahal AC ama telka Sheerta xataa waa caawimaad! Said dani waa danayste aan mudnayn in la doorto ee ay tahay in qori dheer la isaga qabto.
Kani waa Gabay la magacbaxay Ninka dooran duubka u xiroo asad inoo doorra Waxaan kula hadlayaa Baarlamaanka Cusub ee Puntland Dulaal iyo malaal baa ku badan dagalladeeniiye Codkoo loo dareerriyo haddaan qofiba dookhiisa Ka naxow cusuh waaa Ku quuso quraanyo Ninkii hadlayaba ha iska hadlee Asad osman Ee mpls puntland mantey dhaqaqdey.